Esikhathini ukuthutha ngobuningi zokwakha imishini esisemqoka wosayizi omkhulu, okuyinto lula kakhulu futhi kuyasheshiswa athula. Emashumini eminyaka amuva, ngezikhathi anda sezimoto emgwaqeni, ngokuyinhloko ngenxa ukukhula ukwakhiwa, okuyinto saphela ukusingatha yokulahla. Ngakho-ke, kuze kube manje, wasebenzisa trailer ekhethekile amavolumu abalulekile futhi umthamo.
Tipper semitrailer - ke ukuzithiba indlela, okuyinto has a platform isimo. It is asetshenziswa kwezolimo futhi ekwakheni ukuthuthwa kwezimpahla ngobuningi, ngokuba ukuminyana ongaphakeme, ezifana phansi noma idwala ochotshoziwe, kanye zamalahle emkhandweni wensimbi.
Tipper semitrailer kuwufanele isigamu imoto umthamo ofanayo. Yena uyisa zokwakha kabili, okusho ukuthi ngokushesha okhokhela uqobo.
chassis Kukhulumisana - omunye izimo ebaluleke kakhulu ukusebenza imishini, ngoba uma uhambisa umthwalo semitrailer enkulu ewela le ngxenye.
Izinkampani esikhiqiza tipper lulwimi trailer, okuningi. imikhiqizo yabo iyehluka nohlobo ocucuzayo, umzimba we-geometry, inani izimbazo, ukusebenza ukuphakamisa.
Imininingwane tipper lulwimi incike ngenhloso noma asebenzise imishini ethize. Futhi ukuze ukhethe design kwesokudla, kumelwe uqale wazi kwabantu cargo. Phela trailer ne efanayo amandla umthwalo aphethe ungase ube ivolumu ezihlukeneko zomzimba. Njengoba kwabantu isihlabathi ngaphezulu amalahle kwabantu okuyinto yena, mkhulu keramzita nokuminyanisa ngoba ezokuthutha isihlabathi futhi amatshe asebenzisa imishini yokukhulisa ngomzimba ivolumu 26-28, amalahle - 35, nobumba enwetshiwe - kusukela cubic metres 50 kuya ku-60.
Futhi ubumba enwetshiwe kungenziwa uthuthwa lulwimi-trailer of 26 cubes, kodwa izindleko zokuthutha sethani ngamunye cishe kabili, futhi ukusetshenziswa imishini enjalo kuyoba ezingenanzuzo. On injongo umzimba semitrailer incike impahla, Uhlonze lwalo kanye nohlobo ukumiswa.
Ukuze kuncishiswe isisindo sayo enkulu ekwakhekeni yesiminyaminya imiklamo usebenzisa aluminium ukushuba amamilimitha angu ezintathu. Ngakho-ke, ukumiswa setha emoyeni. Semi-entwasahlobo ukumiswa steel umzimba ukujiya omkhulu asetshenziswa lapho amandla kwesakhiwo kubalulekile, isibonelo ukuthuthwa rock esindayo.
Ngo Abschiebewagen wasebenzisa izinhlobo ezimbili emzimbeni.
Ngokwesiko kubhekwa isimo lulwimi isiyingi, okuyinto efanelekayo zokuthutha wezimpahla ngobuningi. Kusukela ngenkathi kulayishwa amatshe hit ibhodi kwi tangent, futhi lokhu ukushaqeka kuyehla, umzimba we-semi isiyingi kunzima umonakalo. Ngaphezu kwalokho, ukwakhiwa okunjalo uhlale lapha eqine kakhulu kunangesikhathi elingunxande, ngakho ibhokisi bendabuko okuphikisana namandla njalo elimpofu amahlangothi anqophileko. Inzuzo ezibaluleke kakhulu - kuba osenyameni okusheshayo ngaphandle ababambelela izinto okuxekethile ezisemagumbini.
A umzimba square esigabeni cross isetshenziswa hhayi nje ngobe kutawutfutfukisa isihlabathi futhi amatshe, kodwa futhi ukuthutha izinto bunjwa wamaqhuqhuva, ezifana slabs noma izitini. Nokho, kubalulekile ukuba siqinise izimbambo, okuyinto kwaba nomphumela omubi phezu isisindo ayo.
Uhlobo ethula bese umthwalo umthamo
Indlela zakudala kuya athula ezingemuva ethandwa kakhulu ngenxa lula ukwakhiwa, at isisindo ayo ngevolumu ephezulu semitrailers umzimba.
Dropside ewusizo uma kukhona ukuphakama imingcele, ezifana endlini. Ngakho-ke, izinqubo ezifanayo asetshenziswa kwezolimo ngoba athula ezitolo. Tipper izithombe lulwimi lapho ethulwa ngezansi, asetshenziselwa athula okusheshayo on emabhilidini engalingani.
Kukhona futhi imiklamo okuyinto enze ezimbili noma jikelele (izinhlangothi ezintathu) athula.
Semi kuhluke indlela kwezulu impahla. Ukudedelwa ophoqelelwe wenziwa nge auger isikulufa okuyinto ukhipha okuqukethwe phakathi ukujikeleza. Lapho athula bayichezukisa esetshenziswa telehandlers.
Futhi omunye umehluko ukwakhiwa semi ezihlobene nokuphathwa. It ingenziwa ngaphandle noma ngaphambili.
Isibalo izimbazo e trailer kuthinta umthamo wayo. Umklamo ezine nge Uhlaka kwagcizelela ukuthwala 45 amathani, triaxial - 35 m, futhi Biaxial - amathani umthwalo 25.
Ilungiselelo elinjalo uhlobo compact asebenzise imishini ethize esetshenziselwa yezokuthutha ukudedelwa umquba, sawdust, silage kwezolimo. Ingasetshenziselwa ukuthutha futhi imithwalo esindayo, ezifana imifino impande, izinto zokwakha okuxekethile ngisho iqhwa.
Semitrailer ugandaganda tipper ngamathayi ububanzi kungaba uniaxial, ngaleyo ndlela kuncishiswe isisindo elihlangana, futhi kukhulisa permeability zenhlangano isondo, noma biaxially, ukuthuthwa imithwalo esindayo. design ivumela ukubopha ukugcina trailer endaweni lapho yokupaka emithambekeni.
Tipper umzimba kungenziwa akhishwe izinhlangothi ezintathu izakhiwo ngokwanele ongaphakeme. Ubeke umthamo umthwalo ngesikhathi amathani ayishumi nanhlanu mayelana amabili nantathu noma amathathu nesishiyagalombili (ne compact) amamitha angama-cubic kilometer zokwakha.
design ukhululekile futhi functional ikuvumela ukuba wehlise ngisho ngaphandle kokuba izinga umzimba lapho kudingeka. Autonomous uhlelo wokubacindezela izosebenza uma ayikwazi ukuphatha uhlelo wokubacindezela ugandaganda, kanye nokuntuleka amasilinda telescopic aqede amafutha engine.
Demand yokulahla ubuchwepheshe ukwakhiwa emakethe yasekhaya buye baphoqa inkampani ukulungisa ukukhululwa kwe-Russian imoto umkhakha kuyinto izakhiwo ezinjalo.
Standard indlela emithathu oluvala amasondo ukhiqiza ephethwe kwekulu Russian umakhi iloli Kamaz. JSC "NefAZ" ukhiqiza yokulahla-trailer ne ukusonga tailgate kanye siphakamise phambi oluvala amasondo nge namandla 30 cubic metres kanti umthamo bephakamisa amathani 33.
Hhayi kudala waqala ukuveza imikhiqizo efana ne Chelyabinsk isitshalo avtopritsepnoy ubuchwepheshe. amayunithi wayo ingashintshwa ukuze imigwaqo Russian camera nanoma yimuphi imigwaqo. Ifomu yendabuko bodywork is kwahambisana by izixazululo zanamuhla ukwandisa umthamo esithwele emithathu oluvala amasondo semi-trailer.
Machine-Isakhiwo Isitshalo "TONAR" kusukela eMoscow - omunye abakhiqizi kunazo owaziwa ezinkulu emathulusi ekwakha. Abschiebewagen "TONAR" avame kwenzeka lichaza ekwakheni izitimela komgwaqo. Ububanzi kuhlanganisa isakhiwo 28 no-32 cubic metres, ezine oluvala amasondo - kusuka 37 kuya 44 cubic metres. Lesi sitshalo yakhelwe uhla dropside lesikusimongcondvo okuyinto ephephile ngenxa ukuzinza okukhulu. Kuyinto efanelekayo amakamelo amancane anezimayini ezindaweni eziphakeme kakhulu kungaba kakhulu ukunciphisa isikhathi yokusebenza.
I abaseduze ukwakhiwa angaphandle imishini umkhiqizi kuyinto Belarus. Abschiebewagen "MAZ" endleleni, futhi ukwakhiwa akunzima ukufunda. Lena umzimba lensimbi ezinkulu isisitho selanga ophuzi ngaphandle athula emuva, biaxial design nomthamo 16 futhi 26 amathani, futhi-eksisi ezintathu - amathani 35.
Ngeke zididaniswe nezinye basePoland semitrailers "Welton". semitrailers Tipper wagibela Ikamela, a isisitho selanga ukusonga phezu chassis triaxial futhi athula emuva zenziwa aluminium noma insimbi. Banezinhliziyo bendabuko komzimba noma isigamu-tube ne amahlangothi anqophileko emqulwini kusuka 27 kuya 49 cubic metres.
"Welton" - omunye izinkampani top ten eYurophu ukwenziwa trailer kanye lulwimi trailer, oveza ezingaphezu kuka ayisithupha izinhlobo zemikhiqizo kanye yethula eziningi siqu izixazululo zabo lobuchwepheshe.
Njengamanje, isitimela umgwaqo ezivamile siqukethe iyunithi ugandaganda ngamabhangqa amathathu amasondo lulwimi trailer, esesikhundleni enama-asi ezintathu noma ezine. Ethwele nomthamo lamasu kuziwa amathani amane.
izinkampani Ezokuthutha makudle izitimela endleleni, njengoba babe umthamo ephakeme kanye kusebentisa emandla agezi ngalokuyimphumelelo. Axial ukulayisha kubo ngaphansi umthwalo esifanayo, nokuthi elolini ezivamile. Lezi imishini kungenziwa eziqhutshwa ngaphandle inkinga ngaphakathi umkhawulo oluvala amasondo umthwalo wonke imigwaqo.
Izinkampani ezenza umsebenzi wezokuthutha ukusetshenziswa ogandaganda futhi elula ngoba noma yisiphi sazo Ungasetha uhlobo oluhlukile isakhiwo. Okungukuthi-trailer "iloli plus i-trailer tipper" ngaphezulu enza izinto ezihlukahlukene kakhulu eceleni iloli dumper. Zonke-ke othenge iyunithi ebukhoneni amaloli epaki kungaba kakhulu ezishibhile elolini.
Tipper semitrailer - amabhasi, okuyinto manje kakhulu ezifunwayo ukwakhiwa, izimayini kanye netekulima ezokuthutha wezimpahla ngobuningi. Oholela abakhiqizi European lasezindlini endaweni yokuncintisana njalo ngcono imikhiqizo yayo kanye ukuthuthukisa letisha ke.
Ukuthuthwa kwezimpahla ezivela eRussia eYurophu Amazwe
Indlela esiphatha ngayo spasm ngomphimbo?
Buddhism China kanye nomthelela wakhona isiko yezwe
Yini odinga ukuyazi mayelana loans for ukwakhiwa izindlu
Izimfihlo ubuhle: Underwear umzimba ekwakheni